REPOBLIKA DOMINIKANINA - Raha ny tantara no jerena, ny fizotry ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay tsy nahomby ny tahan'ny fanarenana dia nahatonga ny taolana tamina fitaovana lehibe azo haverina. Ny fitrandrahana an'ity fitaovana ity dia azo tanterahina amin'ny fampiasana dredges.
Mila vitsy ny loharanon-karena raha ampitahaina amin'ny fitrandrahana mahazatra. Ohatra, ny «dredge» dia afaka - amin'ny dingana tokana - manaisotra sy mitondra ireo fitaovana mankany amin'ny zavamaniry fanodinana any amin'ny elven kilometatra miala azy. Mampihena ny vidiny mifandraika amin'ny fampitaovana renivohitra, asa, solika ary fikojakojana izany.
Tamin'ny 2012, Nividy iray i Envirogold Dragon Ellicott 370® dredge raha te-hanala ny firavaka amin'ny tohatra ary manosika azy ireo amin'ny fambolena azy ireo.
Ny dredge dia nampiasaina hanesorana fitaovana amina halaliny hatrany amin'ny 8m ary manondraka azy ireo ho toy ny halaviran'ny 500m sy 800m ary ny fihenan'ny 11m. Ny slurry dia voatavo mampiasa pipa HDPE 10-santimetatra. Ny dredge dia miteraka sy manondraka ny slurry miaraka amin'ny sakan'ny 28%. Ny firesaka dia manana Gravity manokana amin'ny 2.69 ary ny faritra be dia be 1.71t / m3.
Mba hampitomboana ny fahaiza-manao famokarana sy hanomezana fahafaham-po bebe kokoa amin'ny fandidiana, dia nividy segondra faharoa i Envirogold 370 dredge avy amin'i Ellicott® in 2013.
Mba hahafahana mitantana tsara ny fitaovana sy ny rano amin'ny fantson-drongony, dia nizara ho faritany kely kokoa antsoina hoe dobo mitazana rano ny tohodrano. Raha vao nohafahana ny ampahan'ilay tohodrano dia ampiasaina ny famolavolana tsy misy noforonina mba hamerenana ny fanodinana voajanahary vita avy amin'ny zavamaniry, ka izany no mitazona ny dian-tongotry ny tohodrano. Ny fampandehanana ny dredge dia mampiasa ny rano efa misy eo amin'ny tohodrano. Mody miverina ao amin'ny dobo fikororohana kosa ny rano manondraka ka tsy mila rano fanampiny.
Tao anatin'ny telo volana voalohany tao amin'ny 2013, ny dredge voalohany dia nalaina sy nanompa ny vaoritra 80,000 m3 momba ny zavamaniry ho an'ny fanodinana.
Ny dredge standard Ellicott Series 370 dia dredge suction cutter mandeha amin'ny herin'ny diesel miaraka amina paompy 12 ″ x10 and ary 440 HP manana herinaratra napetraka tanteraka. Izy io dia dredge tena mahery, azo atokisana ary azo entina ho an'ity karazana fampiharana ity. Ny singa voalohany dia natolotra tamina fanapahana mahazatra, raha toa kosa ny ekipa faharoa dia misy mpanapaka kodiarana.
Ny tsena sy ny haitaitaitra ara-teknolojika dia mahatonga ny famerenana indray ny taovolony kokoa. Noho ny fahaizany mitrandraka fitaovana be dia be sy fitaterana azy ireo tsy misy ilana pao-droa, ny dredge dia asa mandaitra iray amin'ireto tetikasa ireto. Miaraka amin'ny fanandramana traikefa mahery indrindra 125 amin'ny famolavolana sy famokarana kalitao avo indrindra, mahery vaika ary azo itokisana, Ellicott Dredges no vahaolana tsara!
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetikasan'ny fandefasana tady